Dowladda Somalia ayaa ku howlan diiwaan gelinta ciidamadii la soo goostay Janan… – Hagaag.com
Dowladda Somalia ayaa ku howlan diiwaan gelinta ciidamadii la soo goostay Janan…
Posted on 2 Abriil 2021 by Admin in National // 0 Comments
Dowladda Somalia ayaa ku hawlan diiwaangelinta ciidamadii uu toddobaadkii hore la soo goystay Wasiirkii Amniga Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur (Janan).
Cabdirashiid Janan ayaa 24-kii bishii March isu soo dhiibay Dowladda Federaalka, iyadoona si weyn loogu soo dhaweeyay Degmada Beled Xaawo.
Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Somalia, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar (Alcadaala) oo ka mid ahaa masuuliyiintii Cabdirashiid Janan ku soo dhaweysay duleedka Degmada Beled Xaawo ayaa xilligaa sheegay in la qaramayn doono ciidamadii uu watay.
Qayb ka mid ciidamadaasi ayaa haatan lagu diiwaangeliyay deegaanka Boholgaras ee duleedka Degmada Luuq ee Gobolka Gedo.
Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida ee Gobolka Jubbooyinka, Bakaal Kooke oo ka mid ah Saraakiisha loo xilsaaray diiwaangelinta ciidamadan ayaa sheegay inay tani qayb ka tahay tallaabada lagu diiwaangelinayo dhammaan xoogaga hubeysan ee aan sharciga lahayn ee joogga buu yiri Gobolka Gedo.
Bakaal Kooke ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxaa uu ku sheegay “Waa u qaabeynta mustaqbalka ee Somalia, iyada oo loo marayo si wanaagsan oo dhisan.”
Cabdirashiid Janan oo dhawaan la hadlay BBC ayaa sheegay ciidamada iyo gaadiidka dagaalka ee uu wato in uu ku biirin doono kuwa qaranka, isla-markaana ay qaranimada Soomaaliyeed ka shaqayn doonaan.
Janan ayaa bishii August ee sanadkii 2019 lagu xiray Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, ka dib markii Dowladda Somalia ay ku eedeysay inuu gaystay gabood-falo ka dhan ah aadanaha, xabsiga ayuuse ka baxsaday bishii January ee sanadkii 2020.